Nagarik Shukrabar - नाइट क्लबमा प्रहरी नजर
शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०८ : ०८
बिहिबार, ११ असोज २०७५, ०२ : २५ | शुक्रवार
प्रहरीले छापा मार्नुको कारण मनोरञ्जनको आवरणमा वेश्यावृत्ति र लागुऔषधको कारोबारसमेत हुने गरेको दाबी गरेको थियो तर सञ्चालक दुई दिन हिरासतमा बसी तारेखमा मुक्त भइसकेका छन् ।
‘अभिभावकहरुसँग जाहेरी माग्दा उहाँहरु तयार हुनु भएन,’ डिएसपी मल्लले भने, ‘अहिलेको अपराध संहिताअनुसार बिना जाहेरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान र कार्बाही गर्न कठिन भएकाले दुई दिन हिरासतमा राखेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइदियौँ । यसपछि उनी छुटेका हुन् ।’
दर्तै नगरी सञ्चालन
डिएसपी मल्लले दिएको जानकारीअनुसार क्लबमा किशोर–किशोरीको प्रवेश गराएको मात्रै हैन, क्लब दर्ता नगरीकनै चलाइएको थियो । क्लब दर्ताको प्रक्रियामात्रै सुरु गरेर सञ्चालन गरेको खुलेपछि अनुमति नलिएसम्म नचलाउनू भनेर बन्द गर्न निर्देशन दिएको र यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी दिएको डिएसपी मल्लले जानकारी दिए ।
अन्य क्लब र डिस्को पनि उस्तै
डिएसपी मल्ल नै यो कुरा स्वीकार गर्छन् । ‘अन्यमा पनि छिराउँछन् भन्ने सूचना आएको छ तर सबै काम प्रहरीले मात्र गर्न सक्दैन,’ मल्लले भने ।अनुगमन गर्ने अधिकार प्रहरीसँग नभएको, जहाँ दर्ता हुने हो त्यहीँबाट अनुगमन हुनुपर्ने मल्लको तर्क थियो ।
अहिले रात्रीकालीन व्यवसायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनको जिम्मा दिने प्रहरीलाई नै हो । यस्तोमा अधिकार छैन भन्न मिल्ला र ? भन्ने जिज्ञासामा डिएसपी मल्लले भने, ‘जे कुरा पनि प्रहरीलाई मात्र जिम्मा दिएर हुन्छ र ? प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा दिने हो । त्यो काम गरिरहेका छौँ । डिस्को, डान्स अनुगमन गर्ने हो भने जहाँ दर्ता भइरहेका छन्, त्यो निकायले प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमन समिति बनाउनु पर्यो नि !’
‘जे पनि प्रहरीले गर्न सक्दैन’
डिएसपी, दानबहादुर मल्ल, प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त
कम उमेरका किशोर–किशोरीलाई प्रवेश गराएको सूचनाको आधारमा क्लब ओनेक्समा छापा मार्दा २३ जना किशोर–किशोरी फेला परेपछि उनीहरुलाई अभिभावकलाई जिम्मा लगायौं । सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर राखेका थियौं ।
अनुसन्धान गर्दा क्लब दर्तासमेत भएको रहेनछ । प्रक्रियामै रहेको बेलामा खोलेको देखिएपछि क्लब बन्द गरायौं । बदमासी गर्ने सञ्चालकविरुद्ध कार्बाहीका लागि क्लबमा भेटिएका किशोर–किशोरीका अभिभावकलाई जाहेरी दिन आग्रह गर्दा कसैले मानेनन् । अहिले बिना जाहेरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्न । कानुनै त्यस्तो बनेको छ । दर्ता नगरी क्लब चलाउँदा पनि प्रहरीले कार्बाही गर्न सक्दैन । त्यसैले दुई दिन हिरासतमा राखेर सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझायौँ । उनी अहिले छुटिसकेका छन् ।
यस्तालाई कार्बाही गर्नुपर्ने हो तर नयाँ अपराध संहिताअनुसार गर्न सकिएन । सबै जिम्मेवारी प्रहरीको जस्तो देखिए पनि अनुगमनको अधिकार छैन । शान्ति सुरक्षाको सवालमा मात्रै हामी खटिने हो । जे पनि प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन । जहाँ दर्ता हुने हो, अनुगमन उसले गर्नुपर्ने हो । प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमन समिति पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यस्तो भएको छैन ।